ဖုန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့မက်စေ့လေးတစ်စောင် – Hlataw.com
တော်တော့ဟာ.. ဆက်မပြောနဲ့တော့.. ငါဒီကောင့်အကြောင်း မကြားချင်တော့ဘူး.. အစ်မကလဲဗျာ.. ချစ်တုံးကတော့ ချစ်လိုက်တာတုန်လို့… အခုမှဘာဖြစ်ရပြန်တာလဲ.. နင်မသိဘူး..ဝေဖုန်း..နင်မသိတာတွေအများကြီး..ငါသူ့ကို ဆက်သည်းမခံနိုင်တာတွေအများကြီးရယ် ဟုတ်လား.. ဒါဆိုလဲဗျာ.. သူဖုန်းဆက်ပါလိမ့်မယ်.. လက်ခံစကားပြောပြီးတော့..အပြတ်ပြောသင့်ရင်လဲ ပြောလိုက်တော့… ကျွန်တော်အောင်သွယ် ပေးထားတာဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကိုလာပြီး နားပူနေတယ်.. အစ်မ ကောင်က….. ဘာငါ့ကောင်လဲ.. ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူး.. မပတ်သတ်ချင်တော့ဘူးဟာ.. ဖုန်းဆက်လာရင် ကိုင်လိုက်မယ်..ငါ့ ကိစ္စ ငါရှင်းမယ်.. ကျေနပ်ပြီလား.. နင်သာသူများအတွက်နဲ့ မျက်နှာပျက်မခံနဲ့တော့.. ငါနင့်ကိုပါ စိတ်ဆိုးလိုက်မှာ… ဟိုးထားပါ..မကေသီရယ်..ကျွန်တော် မပြောနဲ့ဆို မပြောတော့ပါဘူး… ပြီးရော.. နင်ရော သူရော… စောက်ကျင့်တွေ.. အတူတူပဲ.. ဗျာ…ဘာဖြစ်လို့လဲ.. နှာဗူးတွေလေ.. ငါမသိဘူး ထင်နေလို့လား.. ဗျာ.. ထားလိုက်တော့.. ဟိုမှာ အန်တီဆွေ လာနေပြီ… ရှူးတိုးတိုး.. ဘာမှဆက်မပြောနဲ့တော့……။
ကျွန်တော်နဲ့ တရုံးထဲက စီနီယာဖြစ်တဲ့ မကေသီနဲ့ စကားပြောနေချိန်မှာ အန်တီဆွေ ဝင်လာတာပါ။ အန်တီဆွေ ဆိုတာ ဒေါ်ဆွေဇင်ခိုင်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးလောကမှာ မသိသူရှားပါတယ် လုပ်ငန်းကြီးတွေကို ဦးဆောင်နေသူတွေပေါ့။ မကေသီ ဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့် စီနီယာအစ်မကြီးပါ။ အသက်ကတော့ နှစ်ရှစ် လောက်တော့ ရှိုပြီထင်ရပါတယ်။ အန်တီဆွေ အင်မတန်အားကိုရတဲ့ အတွင်းရေးမှူး ညာလက်ရုံးပေါ့။ ကျွန်တော်လား… ကျွန်တော်ကတော့ ယောင်ဝါး၊ ဒီကုမ္ပဏီမှာ မိဘတွေ ရှယ်ယာပါထားတာရယ်၊ ကျွန်တော့် အဒေါ်နဲ့ အန်တီဆွေနဲ့က ငယ်သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးဖြစ်နေလို့ အန်တီဆွေနဲ့ ငယ်ကတည်းက အတူတူ နေလာတာရယ်ကြောင့် တူဝရီးတွေလို ဖြစ်နေတာကြောင့် ဘွဲ့ရအလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေပြီး စော်တွေထည်လဲတွဲပြီး ပွေးနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို ခြေငြိမ်အောင် အန်တီဆွေဆီမှာ အလုပ်သွင်းပေးထားတာပါ။ အန်တီဆွေကလဲ လူရင်း တစ်ယောက်ကို အနားမှာခေါ်ထားရတယ်၊ ယုံကြည်ရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ လက်ခံထားတာပါ။ လက်မခံလဲ မရဘူးလေ၊ အန်တီဆွေ မျက်စိရှေ့မှာတင် ကြီးလာတဲ့ ကလေးဆိုတော့လဲ။
ကျွန်တော်ဟာ အန်တီဆွေကို နွဲ့ဆိုးဆိုးတက်ပါတယ်။ အန်တီဆွေကလဲ ကျွန်တော့်ကိုချစ်လို့ အလိုလိုက် ထားပါတယ်။ အခု မကေသီနဲ ပြောနေတဲ့ကိစ္စက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ရုံးလိုက်လာရင်း မကေသီကို ကြိုက်တယ်ပြော တာနဲ့ အောင်သွယ်ပေးရင်း ဟိုကောင်က ဘာတွေသွားလုပ်တယ် မသိပါဘူးဗျာ။ အပျိုကြီးပေါက်စ တစ်ယောက် ခါးခါးသီးသီးတွေ ဖြစ်နေပြီ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ဇကို ကျွန်တော်သိနေလို့ မကေသီနဲ့ ဘယ်လိုအခြေအနေ တွေများဖြစ်နေပြီလဲလို့ အရမ်းသိချင်လာပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပါတ်တုန်းကဆို မကေသီတစ်ယောက် ရုံးဆင်းတာနဲ့ ယူနီဖောင်းချွတ်၊ စတော်ကင် ဘောင်းဘီတွေ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေလဲပြီး ဒိုးတော့တာပဲ။ အလုပ်တွေတောင် ဒိုင်ခံလုပ်ခဲ့ရသေးတယ်။ သူ့ကိုအကဲ ခတ်ကြည့်တော့ နည်းနည်းထူးခြားတာက မကေသီ နို့တွေဟာ ပုံမှန်မဟုတ်သလိုပါပဲ။ တစ်ခါတလေ ရုံးကိုအ စောကြီး ဆင်းသွားပြီး သူတစ်ယောက်ထဲ ရုံးကို အစောကြီး ရောက်တဲ့နေ့များဆို သူလမ်းလျှောက်တာ ကြည့်ရတာ ကွတတနဲ့။ သေချာပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ဆိုတဲ့ကောင်ရဲ့ ဇက နိုင်း လောက်ရှိလို့ပါပဲဗျာ။
တကယ်တော့ အန်တီဆွေဆီမှာ အလုပ်လုပ်တယ် ဆိုတာက ဟန်ပြပါ။ အဓိကကတော့ ရည်စားနဲ့ကွဲပြီး ကတည်းက စိတ်လေနေတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ဆေးချလိုက်၊ အရက်သောက်လိုက်၊ အပေါင်းအသင်း ကောင်းရင် ကလပ်သွားလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေတာမို့ အိမ်ကလူကြီးတွေက ကြည့်မရတာနဲ့ အန်တီဆွေလက်ထဲ အပ်လိုက်တာပါ။ အန်တီဆွေကလဲ ဒီအကြောင်းတွေသိပေမဲ့ ကျွန်တော်ကို ရုံးမှာတာဝန်တစ်ခု ပေးထားပါတယ်။ တချို့နေရာတွေကို သူသွားရင် ကျွန်တော်က ကားမောင်းပြီး လိုက်ပို့ပေးရပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်ဆို ရုံးရောက်တာနဲ့ ရုံးခန်းထဲမှာ အင်တာနက်ဖွင့် ဒေါက်တာဗိုက်ကလေးတို့ ညမင်းသားတို့ လျှောက်ကြည့် ပျင်းလာရင် ရုံးထဲကိုလျှောက်သွား၊ မာကတ်တင်းဌာနက စော်တွေကိုသွားကြောင်၊ ဒါမှမဟုတ် အရောင်းကားမောင်းတဲ့ ဘဲတွေ ဆီခိုးရောင်းတာကို သွားကျစ်၊ ဘီယာတိုက်ခိုင်း ဘာညာပေါ့။ မကေသီကတော့ နာရီနဲ့အမျှ အလုပ်များသူပါ။ အန်တီဆွေ ရုံးခန်းထဲမှာတော့ ကျွန်တော်နဲ့ မကေသီရဲ့ စားပွဲတစ်လုံးစီ ယှဉ်ရက် ထိုင်ရပါတယ်။ အန်တီဆွေနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ပတ်သတ်မှုကို သိနေတော့လဲ။
ကျွန်တော့်ကို တရုံးလုံးက ဘေးမဲ့ပေးထားကြ လေသတည်းပေါ့ဗျာ… တစ်ရက်ကျွန်တော် ဘာစိတ်ကူးပေါက်တယ် မသိဘူ။ တက်တူး အရမ်းထိုးချင် လာတယ်။ ရုံးကရတဲ့ လခရယ်၊ အိမ်ကဘတ်တဲ့ ပိုက်ဆံရယ်က သုံးလို့လောက်တယ်မရှိပါဘူး။ ဖုန်းဘေလ်တွေ၊ ကားဓါတ်ဆီ ဖိုးတွေ၊ သုံးတာဖြုန်းတာတွေနဲ့ ကုန်တာပါပဲဗျာ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော် အန်တီဆွေဆီမှာ ပိုက်ဆံကြိုထုတ်မလားလို့ တွေးပြီးတော့ အန်တီဆွေအလာကို ရုံးကပဲ စောင့်နေပါတယ်။ ရုံးကလူတွေ ပြောပြချက်အရဆိုရင်တော့ မကေသီနဲ့ အန်တီဆွေတို့ အပြင်ထွက်သွားလို့ နေလည်မှ ပြန်ရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော် ထိုင်စောင့်နေရင်းနဲ့ ပျင်းလာတာနဲ့ ညမင်းသားကိုဖွင့်ပြီး မြန်မာမလေးများရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှများဆိုတဲ့ စာမျက်နှာမှာ ဝင်ပြီးခံစားနေမိပါတယ်။ ကြာလာတော့လဲ စိတ်ကြွ လာတယ်ဗျို့ ဓါတ်ပုံဆရာတွေ တော်တာလဲပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ချစရာစော်က လတ်တလော မရှိသေးဘူးလေ။ ကျွန်တော် ရည်းစားနဲ့ ပြတ်တာလေးလကျော်နေပါပြီ။ ဒီအတောအတွင်းမှာ ညဆိုဒ်က ဘော်ဘော်တွေ လမ်းညွှန်တဲ့။
ဆီလိမ်းတဲ့မာဆတ်မှာ စော်ကိုပလွေမှုတ်ခိုင်းတဲ့ တစ်ကြိမ်ကလွဲလို့ စော်နဲ့မအိပ်ရသေးပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကျပြန်တော့လဲ ကျွန်တော့် ချစ်မမကြီးကို လွမ်းပါတယ်။ သူနဲ့ဆို ကျွန်တော်တို့ စိတ်တူ ကိုယ်တူ မိုးမမြင်လေမမြင် ချစ်ကြတာတွေဟာ အခုအချိန်မှာ လွမ်းလို့ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီပေါ့လေ။ ကျွန်တော်လဲ သူ့ အကြောင်း တွေးရင်းနဲ့ပဲ ညမင်းသားဆိုဒ်ကို ပိတ်ပြီးတော့ အပြင်မှာ ဆေးလိပ်ထွက်သောက် နေပါတယ်။ အာရုံ ပြောင်းအောင်ပေါ့ဗျာ။ ဆေးလိပ်တစ်ဝက် မကျိုးခင်မှာပဲ အန်တီဆွေနဲ့ မကေသီပြန်လာပါတယ်။ လက်ထဲမှာလဲ ဖိုင်တွေ တစ်ပွေ့တပိုက်ဖြစ်နေတဲ့ မကေသီကို ကူညီတဲ့သဘောနဲ့ပဲ သူ့လက်ထဲက ဖိုင်တွဲတွေကို ကူသယ်ပေးရင်း အန်တီဆွေနဲ့ မကေသီအနောက်က လိုက်လျှောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ အန်တီဆွေဝတ်လာတာက ထမိန်စကဒ်ပန်းရောင်နဲ့ အပေါ်ကတော့ ခါးအတိအင်္ကျီ အမဲလေးရယ်။ မကေသီကတော့ ဒူးဖုံးရုံသာရှိတဲ့ မီနီစကဒ်အမဲလေးရယ်၊ အပေါ်ကတော့ ကော်လာပါတဲ့ အင်္ကျီအဖြူလေးရယ် ကိုတွဲဖက် ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ အန်တီဆွေရော မကေသီရော ဘော်ဒီလှကြပါတယ်။
အန်တီဆွေက အပျိုကြီး လို့လူသိကြပေမဲ့ နောက်ကွယ်က အိမ်ထောင်ကျဖူးတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းက ကျွန်တော်တို့ မိသားစုတွေလောက်ပဲ သိကြတာပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အသက်သုံးဆယ့်ရှစ်နှစ်တိုင် အလှမပျက်သေးတဲ့ အန်တီဆွေ့ရဲ့ တင်းမာလုံးဝန်းနေတဲ့ နောက်ပိုင်း အလှနဲ့ သူမရဲ့ ပန်းရောင် စကဒ်ထမိန်အောက်က ထင်းနေတဲ့ ပင်တီအရာလေးကိုကြည့်ရင်း တံတွေးတစ်ချက် မြိုချမိပါတယ်။ မကောင်းပါဘူးလေဆိုပြီး မျက်နှာလွဲလိုက်ပြန်တော့လဲ မကေသီရဲ့ အိုးကောက်ကောက်လုံးလုံး လေးက လှနေပြန်ရော။ ဟူးကနဲ လေပူတစ်ချက် မှုတ်ထုတ်ရင်း ကျွန်တော်သူတို့ အနောက်ကပဲ လိုက်လျှောက်ပြီး ရုံးခန်းထဲကို လိုက်ဝင်လာပါတယ်။ အန်တီဆွေ.. ဘာစားပြီးပြီလဲ.. ကျွန်တော်သွားဝယ်ပေးမယ်လေ.. အံမယ်.. အလိုက်တွေသိနေတာ.. အန်တီရေ.. သူတစ်ခုခု ပူဆာတော့မယ်… မကေသီက ကျွန်တော့အထာကို နပ်နေသူမို့ လှမ်းစပါတယ်။ အန်တီဆွေက ပြုံးနေပြီးတော့.. လာပါအုန်း.. ဝေဖုန်း.. ရဲ့.. သားကိုအန်တီပြောစရာရှိလို့..ကေသီပါလာထိုင်… ဟုတ်..အန်တီဆွေ..ဘာခိုင်းမလို့လဲ…ဟင်.. ဘာမှ မခိုင်းပါဘူး.. သားကိုပြောစရာရှိလို့ ခေါ်တာပါ။
သမီးကေသီလဲ လာ.. အန်တီဆွေ့စားပွဲရှေ့မှာ မကေသီရော ကျွန်တော်ပါထိုင်ပါတယ်။ အန်တီဆွေ့မျက်နှာက ပင်ပန်းမှုတွေဖြစ် ပေါ် နေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် သတိထားမိပါတယ်။ အန်တီဆွေက မျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီး အနောက်ကို ဆံပင်တွေ သိမ်းပြီးထုံးဖွဲ့ထားလို့ ပြောင်နေတဲ့ နှဖူးကချွေးစလေးတွေကို တစ်သှူးနဲ့ သုတ်ကာ……အန်တီလဲ.. အလုပ်တွေကြားထဲ မြှုပ်နေတာကြာပြီ.. သားနဲ့သမီးရယ်.. အရမ်းပင်ပန်းနေတာ..အခုအချိန်မှာ ခဏတော့ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် နားချင်နေတယ်။ ဒါကြောင့်လာမယ့် စနေကစပြီး ကုမ္မဏီကို တစ်ပတ်ပိတ်မယ်၊ ဝန်ထမ်းတွေလဲ နယ်တွေဘာတွေ ပြန်ချင်ရင်ပြန်ပါစေ။ စက်ရုံတွေတော့ မပိတ်ဘူး၊ ရုံးအဖွဲ့ကိုပဲပိတ်မယ်လို့ပြောတာ ၊ရုံးပိတ်တဲ့ ဆယ်ရက်အတွက် ဝန်ထမ်းတွေကို တစ်ရက်ကို တစ်သောင်း နှုန်း အန်တီမုန့်ဖိုးပေးမယ်… ရုံးအဖွဲ့ကိုပဲလား.. အန်တီ.. ဟုတ်တယ်သမီး.. စက်ရုံတွေက ရပ်လို့မရဘူးလေ ပုံမှန်ဆက်လုပ်နေပစေပေါ့။ သူတို့ကိုလဲ အန်တီဆွေ ဒီနှစ် အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ကျရင် တစ်နေရာပို့ပေးမယ်.. အဲ့ကျရင်တော့ ရုံးအဖွဲ့မပါတော့ဘူး။
ဒါကြောင့် သမီးနဲ့သားက မန်နေဂျာတွေ အားလုံးကို အစည်းအဝေးခေါ်ရမယ်။ ရုံးအဖွဲ့ကို ကြေညာချက်ထုတ်၊ ပြီးရင် တာဝန်တွေခွဲပေး ထားပေါ့။ ဟုတ်ပြီလား.. ဒါမျိုးဆို ဝေဖုန်းကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဟိုလိုလုပ်ပါလား.. ဒီလိုလုပ်ပါလားဆိုတာ သူပြော တက်တယ်… ဟားဟား အန်တီဆွေက ပြောရင်းရယ်ပါတယ်။ မကေသီကတော့ ပြုံးရုံသာပြုံးပါတယ်။ ပြီးတော့ မကေသီက.. အန်တီကရော.. ဘယ်လိုနားမယ် စိတ်ကူးလဲ.. ချောင်းသာတို့ ဘာတို့.. အန်တီဆွေကလက်ကာပြရင်း.. မဟုတ်ဘူးသမီး…ဒီတစ်ခါနဲနဲဆန်းတယ်… ကျွန်တော်ရော မကေသီပါ စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်။ အန်တီဆွေ ဘာပြောမလဲ စောင့်ကြည့်နေမိပါတယ်။ ဒီလိုကွ အန်တီမှာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း တစ်ခန်းရှိတယ်။ အန်တီစိတ်ပင်ပန်းရင် သွားနားနေကြပေါ့။ တစ်ခန်း လုံး အန်တီစိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ထားတယ်လေ။ အဲ့ဒီမှာနားမှာ၊ နားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အန်တီဆွေ့ ဖုန်းတွေ ဘာတွေ အကုန် ဆက်သွယ်လို့ မရအောင် လုပ်ထားမယ်။ သမီးတို့က အန်တီနိုင်ငံခြား သွားတယ် ပြောထားပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သားနဲ့ သမီးကတော့ ရုံးမပိတ်ဘူးနော်.. ဟာ.. ဒါဆို ကျွန်တော်တို့က ရုံးတက်ရမှာလား…။
အန်တီဆွေကပြုံးရင်းနဲ့.. မဟုတ်ပါဘူးကွာ.. အန်တီဆွေ့အခန်းမှာ ရုံးလာတက်ကြရမှာ.. သမီးကတော့ အန်တီကို လိုတာကူပေးပေါ့။ ပြီးရင် သမီးကို အဲ့ဒီကွန်ဒိုမှာ နေခိုင်းမလား စိတ်ကူးတယ်။ သမီးလဲ အန်တီဆီကို ရောက်နေတာ ဆယ်နှစ်ရှိပြီလေ။ အန်တီ ဒီအခြေအနေ ရောက်လာတာ သမီးကေသီရဲ့ကူညီမှုတွေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သမီးက အဆောင်မှာပဲနေတာ ဆိုတော့ အန်တီစိတ်မကောင်းဘူးကွာ.. ဒါကြောင့်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင် အဲ့ဒီနေ့ကစလို့ ပြောင်းလာခဲ့တော့ ဟုတ်ပလား ဟုတ်..အန်တီ.. မကေသီ မျက်နှာမှာ ပျော်ရွင်မှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်က အန်တီဆွေ့ကို စချင်တာနဲ့ အန်တီ မျက်နှာလိုက်တယ်… သားကိုရော.. ဟား ဟား.. ဝေဖုန်း.. မင်းက ငယ်ငယ်ကအတိုင်းပဲ.. ဟုတ်ပါပြီ.. မင်းဘာလိုချင်လဲပြော.. တက်တူး ထိုးချင်တာ… အန်တီဆွေ.. ဟင်.. မင်းက အသားအနာခံပြီးတော့… မကြောက်ဘူးလား မကြောက်ပါဘူးဗျာ.. နောက်ပြီး မနာပါဘူး.လက်ရာလှလှထိုးမယ်ဆိုသုံးသိန်းလောက်ကုန်မှာ.. အော်..မင်းက အန်တီဆွေ့ကို စပွန်ဆာ တောင်းနေတယ် ဆိုပါတော့… ဟီး.. ကဲပါ.. မင်းထိုးချင်တဲ့ ဆရာနဲ့ထိုး။
အန်တီဆွေကျသလောက် ရှင်းပေးမယ်..ဟုတ်ပြီလား..… ဒါဆိုလဲလုပ်စရာရှိတာ ဆက်လုပ်ကြပေါ့…. သမီးကေသီက ဘယ်တော့ ပြောင်းလာမှာလဲ… ဟုတ်..သမီးကတော့ အလုပ်တွေဖြတ်ပြီးမှ အေးဆေးပြောင်းလာ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ နောက်ပြီး အန်တီ ဆွေအနား ယူတဲ့ကာလမှာလဲ သမီးပြောင်းလာရင် အဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့ အန်တီဆွေ အနားယူပြီးမှ… မကေသီ စကားမဆုံးမီ အန်တီဆွေက လက်ကလေး ကာပြပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး သမီးကေသီ.. အန်တီဆွေက တမင်တကာ နားရက်မှာ အဖော်ရအောင် ခေါ်တာ.. ဒါဆို ဒီလို လုပ်လိုက်တော့ ဒီနေ့ညနေ ရုံးဆင်းတာနဲ့ သိမ်းစရာရှိတာ သိမ်းထားပေါ့။ မနက်ဖြန်မနက် ဝေဖုန်းကို ပါရာဒို ပေး လိုက်မယ် အဲ့ဒီကားလောက်နဲ့ဆို အဆင်ပြေမယ်.. သမီးလဲတစ်ယောက်ထဲ သမားဆိုတော့ အသုံးအဆောင်တွေ သိပ်မများဘူး ထင်တာပဲ.. ဘီဒိုတို့ဘာတို့ဆို သယ်လာမနေနဲ့.. ထားခဲ့လိုက်တော့.. အိမ်ကျဉ်းသွားမှာ ဆိုးလို့ သမီး ရေ…. ဟုတ်.. ဒါဆိုလဲ သမီးစီစဉ်လိုက်တော့မယ်..အန်တီဆွေ.. သား ဝေဖုန်းကလဲ..မင်းအစ်မကို..လိုတာကူညီပေးလိုက်နော်။
ဟုတ်..အန်တီဆွေ.. ကျွန်တော်တို့နဲ့ အန်တီဆွေလဲ စကားစဖြတ်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်စားပွဲကိုယ်ပြန်ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြပါတော့ တယ်။ မကေသီ ဦးဆောင်မှုနဲ့ပဲ မန်နေဂျာတွေကို အစည်းအဝေးခေါ်တာတွေ ဘာတွေလုပ်ပြီးသွားပါတယ်။ ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်လဲ ဒေါင်းလက်စ ဖူဂျီကိုကန်နိုရဲ့အောကားတစ်ပိုင်းတစ်စကို ဆက်ဒေါင်းနေတုန်းမှာပဲ မကေသီတစ်ယောက် ရုံးဆင်းပြီး လုပ်စရာရှိတာ လုပ်မယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားပါတယ်။ အန်တီဆွေကတော့ ဘယ်အ ချိန်ကတည်းက ပြန်သွားလဲမသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ အစည်းအဝေးခန်းထဲက ပြန်လာတော့ မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ အန်တီဆွေက ကျွန်တော့်စားပွဲမှာ စာလေးတစ်စောင် ကပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရုံးချုပ်ဂိုဒေါင်က ပါရာဒို ကို အိမ်ကိုယူသွားပါတဲ့။ သော့ကိုသူမရဲ့ အံဆွဲထဲမှာ ရှာကြည့်ပါ။ ကားနံပါတ် ရေးထားတဲ့ ကီးချိန်းနဲ့ တွဲထားပါတယ်တဲ့။ ဒါဆို ဒီလိုကားပေးလိုက်ခြင်းက တခြားခိုင်းစရာလဲ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ သေချာသလောက် သိနေပါပြီ။ ကျွန်တော်လဲ စားပွဲကထလို့ ကားသော့ရှာရန်အန်တီဆွေရဲ့ အံဆွဲထဲကိုရှာဖွေကြည့် လိုက်မိပါတော့တယ်။
အံဆွဲထဲမှာ ကားသော့ကို တွေ့ပါပြီ။ စပ်စုတက်တဲ့ ဗီဇလို့ ပြောရမလားပဲဗျာ။ ကျွန်တော်ရှေ့မှာ ရှိနေတဲ့ ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်အနက်ရောင်လေး တစ်အုပ်ကို ကောက်လှန်မိပါတယ်။ ရိုင်းတဲ့အပြုအမူဆိုတာ ကျွန်တော် သိပေမဲ့ ကျွန်တော် စာအုပ်လေးကို ဖွင့်ဖတ်လိုက်မိပါတယ်။ ဆွေဇင်ခိုင်၊ ညည်းသိပ်ကဲမနေနဲ့အုန်း။ ကောင်လေးက အခုမှနုနုထွတ်ထွက်လေးရယ်၊ ညည်းလိုရွတ်တွနေတဲ့ အဖွားကြီးကို ဘယ်စိတ်ဝင်စားပါ့မလဲ ညည်းကိုရရင်တော့ လုပ်ပြီး ထားခဲ့မှ ဒုက္ခနဲ့လှလှတွေ့နေအုန်းမယ်။ ဒီနေ့အမှတ်မထင် ကောင်လေးကိုတွေ့တယ်။ တွေ့တယ်ဆိုတာ သူ့ပစ္စည်းကိုတွေ့တာ ကောင်လေးက အောကားတွေ ဒေါင်းလောခ့်ဆွဲပြီး စိတ်တွေထန်နေတာကို ဘေးမှာလဲ ကေသီနဲ့ဆိုတော့ အင်း..ညိတော့ညိ ကြ အုန်းမလားမသိပါဘူး။ ဒါဆိုအဲ့ဒီကေသီမကို ပါးသာဆွဲရိုက်ပစ်မယ်.. သူ့ကိုငါ ဒီအခြေအနေ ရောက်အောင်ဆွဲတင် ပေးထားတာများ.. ငါ့ကိုအာခံချင်တယ်.. ဆွေဇင်ခိုင်တို့က နှစ်ယောက် တစ်ယောက် စိတ်ပါရင်ဆွဲပေးလိုက်မယ်။ လုတာကြောတာလာမလုပ်နဲ့… ဟိဟိ.. ငါဘာတွေ ရေးဖြစ်နေပါလိမ့်… ဆွေဇင်ခိုင်..နင်စိတ်ထိန်း..သူ့အဒေါ် မျက်နှာရှိတယ်။
ဒါဆိုသေချာပါပြီ…. အန်တီဆွေကကျွန်တော့်အကြောင်းတွေ ရေးထားတာပါ။ ဒါဆိုဒါကဘာတွေလဲ သေချာ သိချင်တယ်။ မထူးပါဘူး မနက်ဖြန်လဲ အန်တီဆွေ ရုံးမတက်တော့မဲ့ အတူတူတော့ အိမ်မှာယူပြီး အေးဆေးဖတ်မယ် ဒီစာတွေထဲကအတိုင်း တကယ်ဆို ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမှာလဲ ဟူးကနဲ ကျွန်တော် လေပူတစ်ချက်ကို မှုတ်ထုတ် မိပါတော့တယ်။မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်တော် အန်တီဆွေ့ကို ကြည့်ရင်း လိုးချင်စိတ်များ တဖွားဖွား ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထိုစဉ် ဝေဖုန်း၏ လက်ကိုင်ဖုန်းမှ အသံမြည်လာသည်။ နံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့ အန်တီဆွေ။ ဝေဖုန်းတစ်ယောက် ရင်တွေခုန်သွားသည်။ ဖုန်းကိုကောက်ကိုင်လိုက်သည်။ အသံ ပင်ပုံမှန်အနေအထား မဖြစ်ချင်တော့….ဟလို သား… ဝေဖုန်း ဘာလုပ်နေလဲ… ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး.. အန်တီဆွေ… ခုနကမှ အိမ်ပြန်ရောက်လို့ နားနေတာပါ စိတ်ထဲမှာတော့ အန်တီဆွေ့ကို လိုးချင်နေတာပါ ဟု ပြောချင်သော်လည်း။ သား…အားမယ် ဆိုရင်လေ. အန်တီဆွေ့အိမ်ကို ခဏလာခဲ့ပါလား။ မနက်ဖြန်ရုံးကို အန်တီမနက်ပိုင်း လာပြီးရင် နားတော့မှာမို့လို့ လိုအပ်တာလေးတွေ ဝယ်ချင်တယ်။
သား..ကားလိုက်မောင်းပေးပါလား…… ဟုတ်..ရပါတယ်..အန်တီဆွေ..ဘယ်တော့လဲ..အခုလား.. အင်း အခုဘယ်နှနာရီ ရှိပြီလဲ… ငါး ထိုးပြီးပြီ အန်တီ.. ဒါဆို ခြောက် နာရီလောက် ရောက်အောင်လာခဲ့လေ.. အန်တီတို့လဲ အပြင်မှာ တစ်ခုခုစားကြတာပေါ့.. ဟုတ်.. အန်တီဆွေ….. သား လာခဲ့မယ်.. ဒါဆို ဒါပဲနော်.. အန်တီဆွေ ရေချိုးအလှပြင်ထားလိုက်မယ်…. ဟုတ်…… အန်တီဆွေထံမှ ဖုန်းချသွားသောအခါတွင် ကျွန်တော်သက်ပြင်း ရှည်ကြီးတစ်ချက်ကို မှုတ်ထုတ်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော့်ကွန်ပြူတာ စခရင်မှာ ပေါ်နေတာက အန်တီဆွေ့ရဲ့ အတွင်းခံတွေသာ ဝတ် ထားတဲ့ပုံနဲ့ အန်တီဆွေ့အသံ ကြားလိုက်တဲ့အခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကျွန်တော့်ညီလေးကိစ္စပါ။ သူအရမ်းကို ခေါင်း ထောင်ကြည့် နေပြီလေ။ သူ့အတွက် နယ်မြေသစ်များ ရှိလေမလားဆိုပြီးတော့…….။ ဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ရှိသည့် ဆိုင်ကိုရွေးပါဆိုလို့ ကျွန်တော်ကန်တော်ကြီးထဲက ယိုးဒယား ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ရွေးဖြစ်သည်။ အန်တီဆွေ့ကို ပြောလိုက်တော့ သူကလဲ သဘောတူသည်။
မရောက်တာ အတော်ကြာပြီတဲ့ စားသောက် စရာများမှာလိုက်ပြီးနောက်တွင် … သား..ဘီယာသောက်ချင် သောက်လေ…… ဘီယာတော့ မသောက်ချင်ဘူး… ကျွန်တော် ဘီယာမသောက်တာ ကြာပြီ..အန်တီ.. ဟုတ်လား.. ဘာလို့လဲ.. ဗိုက်ပူမှာဆိုးလို့.. ကစားထားတာတွေ အလကားဖြစ်ကုန်မယ်လေ… ဒါဆို အပြင်းသောက်မလား……… ကျွန်တော်လဲ သောက်ချင်နေတာနဲ့ မငြင်းချင်တော့.. ဟုတ်…ဟုသာဖြေလိုက်သည်။ အန်တီဆွေက..သူ့အတွက်လဲ ကိုကာကိုလာ နှင့်စပ်ပေးဟုဆိုလာသည်။ ကျွန်တော် တစ်ပက်ဆီ မှာလိုက်သည်။ ကျွန်တော်အတွက်တော့ ဂျော်နီ နှင့် အန်တီဆွေ့အတွက်တော့ ကိုလာနှင့် ရောရန် ကုတ်တစ်ဗူး မှာလိုက်သည်။ ဆိုင်ကစားပွဲထိုးကို မစပ်ခိုင်းတော့ပဲ အန်တီဆွေ့အတွက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စပ်ပေးလိုက် သည်။ အရက်စပ်ပေးနေစဉ် အန်တီဆွေသည် ကျွန်တော့်ကို မျက်လုံးရွဲကြီးများနှင့် ခိုးကြည့်နေကြောင်း ကျွန်တော် သတိထားမိလိုက်သည်။ ဝီစကီခွက်ကို ရေခဲတုံးအသံမြည်အောင် လှုပ်လိုက်ပြီးနောက်တွင် ကျွန်တော်နှုတ်ခမ်းစွတ်ယုံ ငုံလိုက် သည်။ ထို့နောက် ဆေးလိပ် တစ်လိပ်ကိုထုတ်ကာ မီးညှိဖွာရှိုက်လိုက်သည်။
အန်တီဆွေကတော့ ကန်တော်ကြီး ရေပြင်ကိုငေးလျှက် သူမ၏လက်မှ ဝီစကီခွက်ကို အာစွတ်ယုံ နဲနဲသောက်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင် သည် တိတ်ဆိတ်နေသည်။ ကျွန်တော်လဲ ဝီစကီကို မျှင်းသောက်လိုက်၊ စီးကရက်ဖွာလိုက် လုပ်နေသည်။ ထိုစဉ် အန်တီဆွေ၏ ခြေထောက်မှာ ကျွန်တော်၏ ခြေဖမိုးသို့ လာထိနေသည်ဟု ခံစားရသဖြင့် အနောက်သို့ အနဲငယ် ဆုတ်လိုက်သည်။ သို့သော်..အန်တီဆွေ၏ ခြေဖဝါးမှာ ကျွန်တော်ခြေဖမိုးသို့ ထပ်၍လာထိပြန်သည်။ ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါတော့ မရုန်းတော့ သုံး မိနစ်ခန့် ကြာလာတော့ အန်တီဆွေ၏ ခြေမလေးများ လှုပ်ရှားလာ ပြီး ကျွန်တော့်ခြေဖမိုးကို လာပွတ်နေသည်။ ကျွန်တော်အသာလေး ငြိမ်နေလိုက်ပြီးနောက် ကျွန်တော်၏ ကျန်ခြေ ထောက်တစ်ဖက်မှ ခြေဖဝါးဖြင့် အန်တီဆွေ၏ ခြေဖမိုးကို အုပ်လိုက်သည်။ ကျွန်တော်လဲ သူ့နည်းအတိုင်း ခြေမ လေးကို ကစားကာ ပွတ်ပေးနေမိသည်။ အချိန်မည်မျှ ကြာမြင့်သွားသည် မပြောတက်ပေ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဘာမှ မပြောဖြစ်ကြ။ ကိုယ့်အရက်ခွက် ကိုယ်ကိုင်ကာ တွေးချင်ရာတွေးရင်း ခြေထောက်ခြင်း ကလိနေခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ မှာထားသော အစားအစာများ ရောက်လာမှ ခြေထောက်ခြင်း ကလိနေခြင်းကို ရပ်လိုက်ပြီး နောက် ကျွန်တော်တို့ အစားအစာများကို စားသောက်ကြသည်။ အန်တီဆွေနှင့် ကျွန်တော်တို့ သူတစ်ပြန် ကိုယ် တစ်ပြန် ဟင်းတွေခပ်ထည့်ပေးရင်း အတော်လေး ထမင်းစားဝင်သွားကြသည်။ စားသောက်ပြီးစီးသောအခါတွင် အန်တီဆွေ က.. နဲနဲသောက်လိုက်လို့လား မသိဘူး..ထမင်းစားလို့ ကောင်းတယ်နော်.. ဟုတ်တယ်.. အန်တီဆွေ.. ခြေထောက်ခြင်း ကလိနေသည်ကို နှစ်ယောက်စလုံး မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြသည်။ ထို့နောက် ကျသင့်ငွေရှင်းပြီနောက်တွင် .. ဝေဖုန်း..သား..ဗိုက်လေးနေတယ်..လမ်းလျှောက်ကြမယ်လေ.. ကောင်းသားပဲ.. အန်တီဆွေ့ အသံက နဲနဲလေးနေသည်။ မိန်းကလေးများသည် အရက်တစ်ပက်၊ ဘီယာတစ်ခွက် ဝင်သွား လျှင်ဇာတိပြချင်သည်ကို ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရ သိထားသည်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်သား ဘေးချင်း ယှဉ်လျှက် လမ်းလျှောက်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ချက်တစ်ချက် သူမ၏ပခုံလေးများသည် ကျွန်တော်နှင့် လာလာထိနေ သည်ကို သတိထားမိသည်။
ထို့နောက်လူရှင်းပြီး အတွဲများသော နေရာသို့ ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ လမ်းလျှောက်လာသည်မှာလဲ အတော်လေး ခရီးရောက်ခဲ့သည်။ ခြုံများ၊ ကျောက်တုန်းများစသဖြင့် အကာအကွယ်တစ်ခုခုရှိသည့် နေရာများတွင် အတွဲလေးတွေ ကိုယ်စီကိုယ်ဟ။ တစ်ချို့ကစကားတွတ်ထိုနေကြည်။ အချို့ကတော့ ကစ်ဆင်ပေးနေကြသည်။ အချို့ကတော့ ကိုယ်ပိုင်ကားများနှင့် အတွဲရှိသောကားများသည် အနည်းငယ်လှုပ်နေကြသည်။ ဝေဖုန်း၊ ညောင်းတယ်ကွာ..ခဏထိုင်ရအောင်.. အတွဲတွေ ချည်းပဲ အန်တီ.. မှောင်လဲ မှောင်တယ်.. အို… ဘာဖြစ်လဲ.. အတွဲချောင်းမှာပေါ့.. ဟုပြောရင်း သူမရယ်လေသည်။ သူမ၏အသံလွင်လွင်လေးသည် ကျွန်တော် ကိုရင်ခုန်စေအမှန်ပင်။ ကျောက်တုန်းတစ်တုံးနားတွင် ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ထိုင်လိုက်ကြသည်။ထိုစဉ် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်၏ အရှေ့ရှိမြင်ကွင်းမှာ သစ်ပင်တစ်ခု၏ အောက်တွင် ထိုင်နေသောအတွဲတစ်တွဲ ကစ် ဆင်ဆွဲနေကြသည်။ နှုတ်ခမ်းချင်း ဂဟေဆက်ထားသည့်အလား။ ကောင်လေး၏ လက်များသည် အငြိမ်မနေ၊ ကောင်မလေး၏ ထမီထဲသို့ ရောက်နေသည်။
ကျွန်တော်နှင့် အန်တီဆွေထိုမြင်ကွင်းကို သေချာရှင်းလင်းစွာ မြင်ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မျက်နှာ ချင်းဆိုင် ဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ မာကျူရီမီးရောင်ထိန်နေသည်က တစ်ကြောင်း။ မကြာမီ ကောင်မလေးသည် ကောင်လေး၏ ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဆွဲဖြုတ်လိုက်သည်။ ထောင်မတ်နေသော လိင်တံကြီးထွက်လာသည်။ ကောင်မ လေးသည် တစ်ချက်ဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ပြီး လီးကိုကုန်း၍ စုပ်လေတော့သည်။ ဟယ်..ကဲ..လိုက်ကြတာ.. ပြောသားပဲ.. ဒီနေရာက… အတွဲတွေချည်းပါပဲလို့ ဟုတ်ပနော်… အခုခေတ်ကလေးတွေများ… အင်း… ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်လေ… အင်း..အင်း…ရှီး..အင့်..ဖတ်ဖတ်.. ကို..မြန်မြန်ဆောင့်..လူတွေလာမယ်… အင်းပါ…အား..ကောင်းလား..ကို ..ပြီးလိုက်တော့မယ်.. အင့် အင့် အင့်… အားအား… ရှီး… ပြီးပြီးပြီးပြီ.. ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ကအတွဲကိုကြည့်နေခိုက် ကျောက်တုန်းအနောက်မှ ကြားရသော အသံဖြစ်သည်။ သူတို့ ဆွဲနေ ကြလေသည်။ အန်တီဆွေနှင့် ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်ဖြစ်ကြသည်။ အန်တီ ဆွေက တစ်စုံတစ်ခုပြောမည့်ဟန့် ပြုသောအခါ။
ကျွန်တော်က လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် ရှူးတိုးတိုးလို့ လုပ်ပြလိုက်သည်။ ပြီးနောက် အန်တီဆွေ့အနားနားကပ်၍ အရှိန်ပျက်သွားမယ်လေ..အန်တီ..ငရဲကြီးတက်တယ်………. သူမ၏ကိုယ်သင်းနံ့လေးကို အနီးကပ်ခံစားရသဖြင့် လီးတောင်ချင်လာသည်။ အန်တီဆွေက ကျွန်တော့်ကို ပြုံးစစဖြင့် ကြည့်ရင်း နှာဗူးဟု လက်ဟန်ခြေဟန်ဖြင့် လုပ်ပြလိုက်လေတော့သည်။ အမလေ…ဝေဖုန်း..လုပ်ပါအုန်း..ဘာကြီးလဲ… မြေကြွက်ကြီးတစ်ကောင် အန်တီဆွေ့ ခြေထောက်နားက ဖြတ်သွားတာပါ။ အန်တီဆွေ့ အော်သံက အတော် လေး ကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ အနောက်ဖက် ကျောက်တုံးနောက်မှာ ဆွဲနေတဲ့ အတွဲတောင်မှ ချောင်းဆိုးသံတွေ ဘာတွေထပေးနေတာကို ကြားရပါတယ်။ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး… အန်တီဆွေ… ကြွက်ပါ… အမလေး… ရုတ်တရက်ဆိုတော့ လန့်သွားတာပေါ့သားရယ်… ဟူး… မလွယ်ဘူး…… ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့ အန်တီဆွေ့က ကျွန်တော့်လက်မောင်းကို အားကိုးတကြီး ဆုတ်ကိုင်ထားပါ တယ်။ သူမ ရဲ့ခေါင်းလေးကိုလဲ ကျွန်တော့်ပုခုံးမှာ မှီထားပါတယ်။
ဒီအချိန်မှာ အန်တီဆွေတစ်ယောက် တစ်စုံတစ်ခု ကို သတိ ထားမိသွားပါပြီ။ ချည်သားသရီးကွာတ ဘောင်းဘီအောက်မှာ အတွင်းခံဝတ်ထားရက်နဲ့ ငေါထွက်ချင်နေတဲ့ ကျွန်တော့်ငပဲကြီးကို အန်တီဆွေ စိုက်ကြည့်နေတာကိုလဲ ကျွန်တော်သတိထားမိပါတယ်။ ဘာမှတော့ပြန်မပြော ဖြစ်ပါဘူး။ အန်တီဆွေက ခေါင်းကိုအနည်းငယ် ခွါလိုက်ပြီးတော့ ဝါး..သားလက်မောင်းကြီးတွေက ကြီးလှချည်လား.. ဟုတ်တယ်..အန်တီဆွေ.. ဂျင် ကစားထားလိုပါ။ အန်တီဆွေက ကျွန်တော်လက်မောင်းတွေကို ကိုင်ကြည့်နေပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက် ဘဝကတည်းက ဝိတ်တုန်းတွေကို ဒုက္ခခံပြီးမထားတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးက ဒီမှာအကျိုးပေးပါပြီ။ သူကကိုင်ကြည့်ရုံတင်သာမဟုတ် ဖွဖွ လေးပွတ် နေပါတယ်။ အန်တီ… ကျွန်တော် ယားတယ်ဗျ ကျွန်တော်က ယားတက်တော့ နေရခက်လာပြီး ပြောလိုက်တာပါ။ အန်တီဆွေက ခပ်ဖွဖွ ရယ်ရင်းနဲ့ ယားတက်တယ် ဟုတ်စ.. ဝေဖုန်း.. မင်းအကြောင်း ငါမသိတာများမှတ်လို့ကွာ.. ရည်းစားတွေ မှိုလိုပေါက် လျှောက်ထားနေတဲ့ ချာတိတ်လေးကများ…. ယားတက်တယ်ဆိုတော့.. အင်း.. စဉ်းစားစရာပဲ။
အန်တီဆွေကလဲ ရည်းစားထားတာနဲ့ ယားတက်တာနဲ့ ဘာဆိုင်လို့တုန်း…. မင်းတို့ယောင်္ကျားလေးတွေ အဲ့ဒါခက်တာပေါ့။ ရည်းစားဖြစ်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ အတူ အပြင်မှာများသွား ရမယ်ဆို ကျောလေးရရင် ကျောလေးပွတ်လိုက်၊ လက်မောင်းလေးရရင် လက်မောင်းလေး ပွတ်လိုက်နဲ့ သူတို့ယားဖို့ လဲချန် ထားပါအုန်း……… ဟား ဟား… အန်တီဆွေ စကားကို ကျွန်တော်သဘောကျစွာ ရယ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အန်တီဆွေက ပေါ်တင်ပဲ ကျွန်တော်လက်မောင်းတွေမှာ မှီရင်း ဇ်ိမ်ပဲ… ဝိတ်ကစားထားတာ ဒီတစ်ကွက်တော့ အသုံးဝင်တယ်ဟေ့… သေချာ မှီထားလေ… အန်တီရဲ့… ကျွန်တော်လဲ မသိမသာ မာဆယ်တွေကို နဲနဲတော့ တောင့်လိုက်ပါတယ်။ အန်တီဆွေတစ်ယောက် ကန်ရေပြင်ကို ကြည့်နေတာလား။ အန်တီဆွေ့ရဲ့ အနီးကပ်အထိအတွေ့ကြောင့် မာတောင်နေပြီး ငေါထွက်ချင်နေတဲ့ ကျွန်တော့် ငပဲကိုပဲကြည့်နေတာလားတော့ မသိပါဘူး။ ခေတ္တခဏ တိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်မှန်းတာ မလွဲဘူးဆိုရင် သူမအကြည့်တွေဟာ ကျွန်တော့်ညီလေးဆီက ဘယ်မှမရောက်နိုင်ဘူးလို့တော့ ထင်မိတာပါပဲဗျာ။
ပြီးခါနီးရင်ပြောနော်.. ရှင်တို့တွေက စောက်ကျင့်ယုတ်တက်လို့ ပြောတာ.. အေးပါဟာ… မှုတ်မှာသာ မှုတ်စမ်းပါ…… တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ အန်တီဆွေတို့ အကြားမှာ အသံတစ်ချို့ တိုးဝင်လာပါတယ်။ ကန်တော်ကြီး အထာနပ်နေတဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ ဘာဆိုတာ တန်းသိပေမဲ့ အန်တီဆွေကတော့ သိချင်တဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို သေချာကြည့်နေပါတယ်။ ဝေဖုန်း.. ဘာသံတွေလဲ.. လာ..အနားတိုး..ပြောပြမယ်… အင်း… အန်တီဆွေက ကျွန်တော့်အနား တိုးလာပါတယ်။ကျွန်တော်ကလဲ ဖြစ်ကြောင်းကုန်စဉ် ပြောပြလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါက တော့ ကျွန်တော်တို့ အနောက်မှာ ပြည့်တန်ဆာလား ဒါမှမဟုတ် ကကတစ်ယောက်ကိုများ လျော်ပြီးခေါ်လာ တဲ့ ဘဲတွေက သူတို့ခေါ်လာတဲ့ ကောင်မလေးတွေကို လီးစုပ်ခိုင်းနေတာပါ။ အတွဲချောင်းတာ ဝါသနာပါတဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြချက်အရဆိုရင်တော့ ဒီလိုမျိုးတွေဟာ အဘိုးကြီးတွေ ဒါမှမဟုတ် တက္ကစီကားသမားတွေ လုပ်နေကြလို့ သိရပါတယ်။ သူ့ဂွင်နဲ့သူ သူ့လမ်းကြောင်းနဲ့သူ လှုပ်ရှားတဲ့ ဇယားတွေရှိပါတယ် လရည်တစ်ခါထွက် ကို ငါးထောင် ဆိုလား။
ဟယ်… အဲ့ဂလိုကြီး… ဟုတ်ပ… ဟုတ်ပ… အော်.. အန်တီဆွေ ဘာမှလိုက်မမှီပါဘူးကွယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ကယ်တင်ရှင်လေး ရောက်လာ ပါတယ်။ သူကတော့ ခြင်ဆိုတဲ့ သတ္တဝါပါ။ အန်တီဆွေရဲ့လက်ကို ကိုက်နေလို့ အန်တီဆွေက ရုတ်တရက် ခြင်ကို ဖတ်ဆိုလှမ်း ရိုက်လိုက်တော့ သူ့မရဲ့လက်အလွဲမှာ… ဟာ…… အန်တီဆွေ နှုတ်ခမ်းလေး အဝိုင်းသားဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော်ငပဲကို လာထိသွားတာပါ။ ကျွန်တော်က လဲ ရယ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အန်တီဆွေက ပြောတယ် လူဆိုးတဲ့ ဒီလောက်ဆို ကျွန်တော်လဲ သဘောပေါက်ပြီမို့ လက် တစ်ဖက်နဲ့ အန်တီဆွေ့ကို သိုင်းဖက်လိုက်ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲကို ဆွဲသွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျွန်တော် တို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ တောင်မရောက် မြောက်မရောက် ဖြစ်နေတဲ့ ကန်တော်ကြီးထဲက အခြေအနေကို အသက်ပေးပြီး တော့ ကယ်တင်ပေးတဲ့ အမည်မသိ ခြင်ကို ကျေးဇူးတင်မိတာအမှန်ပါ။ အန်တီဆွေက ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ထဲမှာ သူမရဲ့လက်ချောင်းလှလှ လက်သည်းချွန်ချွန် လေးတွေဟာ ကျွန်တော့ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်သားကို အင်္ကျီပေါ်ကနေပြီး ဖွဖွလေး ကုတ်ခြစ်နေပါတယ်။
ကျွန်တော်ကလဲ အန်တီဆွေကို ဖက်ထားတယ် ဆိုပေမဲ့ ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေက အငြိမ်တော့ မနေပါဘူး။ သူမကျောပြင်ကို ပွတ်သပ်ပေးနေပြီး သူမဝတ်ထားတဲ့ ဘရာဇီယာချိတ်လေးကို အင်္ကျီပေါ်ကနေပဲ အသာလေး ဆွဲလိုက်ပြန်လွှတ်လိုက် လုပ်ပေးနေရင်း တစ်ချက်တစ်ချက်မှာတော့ ကျောပြင်မှတဆင့် အောက်ကို အနည်းငယ် လျှောဆင်းသွားပြီး ကျွန်တော့်လက်တွေဟာ အန်တီဆွေ့ ခါးနေရာက တီရှပ်ရဲ့နောက်ဆုံး ဧရိယာလေးကို မလိုက်ပြီးတော့ ဂျင်းဘောင်းဘီအောက်က အတွင်းခံ ရဲ့သရေကြိုးလေးကို ဆွဲလိုက်ပြန်လွှတ်လိုက် လုပ်ပေးနေတာ.. ဖတ်.. ဖတ် ဆိုတဲ့အသံတွေ မြည်လာတဲ့အထိပေါ့ အန်တီဆွေကလဲ ခေသူတော့မဟုတ်။ ကျွန်တော့်ငပဲကို လာပြီးလက်ကလေးနဲ့ ဖွဖွလေးကိုင်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော် အန်တီဆွေ့ကို ဖက်ထားရာကနေ မျက်နှာကို ဆွဲမော့လိုက်ပြီး သူမရဲ့နှုတ်ခမ်းသား ဆူဆူလေးတွေကို အနမ်းမိုးရွာ ပါတော့တယ် ခင်ဗျာ။ အန်တီဆွေဟာ ခေသူတစ်ယောက် မဟုတ်မှန်း သူမရဲ့အနမ်းတွေကတဆင့် သက်သေခံပါတယ်။ အန်တီရဲ့ အနမ်းတွေဟာ ပညာသားပါတယ်လေ။
အန်တီဆွေရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်တွေကို ဖိပြီးနမ်းပြီးတာနဲ့ အန်တီဟာ သူမရဲ့လျှာကို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်း အတွင်းသားတွေအထိ ထိုးဆွပေးပါတယ်။ သူမရဲ့လက်ကလဲ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညီတော်မောင်ကို ဘောင်းဘီအပေါ်ကနေပဲ ပွတ်ပေးနေပါတယ်။ ညီတော်မောင်ဟာ စိတ်ကြိုက်ခေါင်းထောင်ပြီး လောကကြီးကို စူးစမ်းချင်နေတဲ့အတွက် ထောင်မတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလဲ အရိုင်းထဲကအယဉ် တစ်ယောက်မို့ အန်တီဆွေရဲ့ ဖွံ့ထွားတဲ့နုိ့တွေကို အင်္ကျီပေါ်ကနေပဲ ကိုင်တွယ်လိုက်၊ ဘရာဇီယာပေါ်က နို့သီးခေါင်းရှိလောက်မဲ့ နေရာကိုမှန်းပြီးတော့ ချေပေးလိုက်လုပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းတဲ့ အချိန်ကာလဟာ အသက်ရှုသံတွေ မြန်ဆန်နေကြပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့အသက်ရှုဖို့ မေ့နေကြပါတယ်။ အန်တီဆွေ့ ညီမလေးရှိရာကို ဂျင်းဘောင်းဘီပေါ်ကတဆင့် စမ်းသပ်လိုက်ပေမဲ့ ဘောင်းဘီဟာ ထူတဲ့ အတွက် သေချာတော့ ထိထိမိမိမရှိလှပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အထိအတွေ့ကတော့ ပူနွေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ မိနစ် နှစ်ဆယ်လောက်ကို အငမ်းမရ နှုတ်ခမ်းချင်းဆက်လျှက် နမ်းရှံ့ပြီးချိန်မှာတော့ နှစ်ယောက်သား နှုတ်ခမ်းချင်း ခွါလိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်မှသာ အသက်ရှုတောင် ကျပ်နေကြတယ်ဆိုတာကို သတိထားမိကြတာပါ။ အန်တီဆွေ က ကျွန်တော့်ကို လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့ ယခုလိုပြောပါတယ်။ လူဆိုး.. အရမ်းဆိုးတာပဲကွာ တဲ့…လူဆိုးလေး တစ်ယောက်ဟာ အန်တီတစ်ယောက်ကို တစ်စုံတစ်ခု တောင်းဆိုလိုက် ပါတယ်။ ရှိတာအကုန်ထုတ်ဖို့ တောင်းဆိုတာမဟုတ်ပဲ ဝတ်ထားသမျှ အကုန်ချွတ်ဖို့အတွက် တစ်နေရာသွားဖို့ပါ။ အချိန်ဆိုတာ စက္ကန့်နဲ့အမျှ တန်ဖိုးရှိလှပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ အန်တီဆွေတို့ နှစ်ယောက်သား ပါကင်မှာ ထိုးထားတဲ့ ကားဆီကို လက်ချင်းတွဲပြီး အပြေးတစ်ပိုင်း ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ အန်တီဆွေကတော့ ဆယ်ကျော် သက်လေးလို ပျော်ရွှင်နေလေရဲ့ ကားပေါ်ရောက်တော့ အန်တီ… ဘယ်သွားကြမလဲဟင်.. ဟိုတယ်သွားမလား ဟိုတယ်တော့ အဆင်မပြေဘူး.. အန်တီ မသွားချင်ဘူးကွာ… ဒါဆို ဘယ်သွားမလဲ…အင်း…….အန်တီ့ အိမ်ပဲသွားမယ်…… ကွန်ဒိုကို ပြောတာလား… မဟုတ်ဘူး… သော့မပါဘူးကွ… အန်တီ့ ဘောက်ထော် အိမ်… ဖြစ်ပါ့မလား… ဒီအချိန်ဆို ဦးငယ်တို့လင်မယား အိပ်နေပြီ။
ကောင်မလေးပဲရှိတာ… ဖြစ်ပါတယ်…အလုပ်ရှိတယ်ပေါ့ အင်း… မြို့တွင်းမှာ တစ်နာရီ မိုင်ခြောက်ဆယ်ဟာ အတော်လေး မြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တစ်နာရီ ဘယ်နှမိုင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အန်တီအိမ်ကို အမြန်ရောက်ဖို့ ကားလီဗာကိုပဲ ဖိနင်းနေပါတယ်။ အန်တီကတော့ ဘေးကနေပြုံးစစနဲ့ ကျွန်တော့် ကိုကြည့်နေပါတယ်။ အန်တီဆွေ့ အိမ်ရောက်တော့ ခြံစောင့်က တံခါးလာဖွင့်ပေးပြီး နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ အိမ်ထဲဝင်ကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ် အန်တီဆွေ့အိမ်မှာ လူမရှိသလိုကို ဖြစ်နေတာပါ။ အားလုံးက သူ့အခန်းသူ ရှိနေကြပါတယ်။ အိမ်ဖော်ကောင်မလေးကိုလဲ အလုပ်ရှိတယ် ကော်ဖီနှစ်ခွက် အခန်းထဲလာပို့ ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လှေခါးကတဆင့် အန်တီဆွေ့အိမ်ရဲ့ အပေါ်ထပ်ကို တက်လာခဲ့ပါတယ်။ လှေခါးတက်တော့ အန်တီ့နောက်က လိုက်တက်လာတာမို့ နိမ့်တုန်မြင့်တုန်ဖြစ်နေတဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီအောက်က အန်တီ ဖင်တုံးကြီးတွေဟာ တိုက်ပွဲ တစ်ပွဲအတွက် စစ်ကြေညာအလား ဖြစ်နေပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ကျွန်တော် ဒီနေ့ညမှာ ဒီဖင်တွေကို ကိုင်ပြီး တော့ကို လိုးမှာလို့ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခု ချလိုက်ပါတော့တယ်ဗျာ။
အန်တီဆွေ့ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အဲယားကွန်းရဲ့ အေးမြလတ်ဆတ်တဲ့ လေအေးလေးနဲ့အတူ လာဗင်ဒါ ရနံ့လေးက ဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်။ အန်တီဆွေ့ အခန်းပြင်ဆင်မှုကတော့ ရှင်းလင်းသပ်ရပ်လှပါတယ်။ နှစ်ယောက် အိပ်ကုတင်ကြီးပေါ်မှာ စပရိန်မွေ့ရာကြီးဟာ အလွန်တရာမှ လိုက်ဖက်လှပါတယ်။ ကုတင် ခြေရင်းမှာတော့ ဖလပ် တီဗီတစ်လုံး၊ တီဗီစင်ဘေးမှာတော့ အန်တီဆွေ့ စာကြည့်စားပွဲပါ။ အခန်းရဲ့ ညာဘက်နံရံကပ် ဘီဒိုကြီးတစ်လုံးနဲ့အတူ ဘယ်ဘက်မှာတော့ ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲရက် အခန်းတစ်ခန်းရှိပါတယ်။ အခန်းထဲကို လေ့လာနေတဲ့ ကျွန်တော့်ကို အန်တီဆွေက.. ဘာတွေ ကြည့်နေတာလဲ.. ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး…… ကျွန်တော်လဲ ခပ်သွက်သွက် အန်တီဆွေ့ခါးက ပြေးဖက်လိုက်ပါတယ်။ အန်တီဆွေက ခနလေးဟု တိုးတိုး လေး ပြောပြီးတော့ ဟန်မပျက်ဖိုင်တွဲတစ်ခုကို ယူလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စာကြည့်စားပွဲမှာ နှစ်ယောက် သားထိုင်ပြီး ဖိုင်တွဲကို ဟိုလှန်ဒီလှော လုပ်နေရင်း… ဒေါက်…ဒေါက်…အန်တီဆွေ ကော်ဖီရပြီ… အေး..ဇာခြည်..ဝင်ခဲ့။
အိမ်ဖော်ကောင်မလေး ဇာခြည်က ကော်ဖီခွက်နှစ်ခွက်ကို ကျွန်တော်တို့အရှေ့ လာချပေးပါတယ်။ ပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့… အန်တီ..သမီးသွားတော့မယ်..ဘာခိုင်းအုန်းမလဲ.. ဘာမှ မခိုင်းတော့ပါဘူး… နင်လဲ အိပ်ချင်အိပ်တော့လေ.. ဟုတ်.. အန်တီ… ဇာခြည်ဆိုတဲ့ အိမ်ဖော်မလေးကတော့ မိန်ကလေးပီပီ စပ်စုတဲ့အကြည့်နဲ့ ကျွန်တော်ကို အကဲခတ်နေတာ တွေ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဖိုင်တွဲကိုကြည့်လိုက် ကယ်ကူလိပ်တာ ကို တဖြောင်းဖြောင်းနှိပ်လိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်ချင် ယောင် ဆောင်နေပါတယ်။ ဇာခြည်ကိုပြန်ပြီး အကဲခတ်လိုက်တော့ သူတကယ်ပဲ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆို တာ ယုံသွားတဲ့ မျက်နှာပေးနဲ့မို့ စိတ်အေးရပါတယ်။ အိမ်ဖော်ကောင်မလေး အခန်းထဲက ပြန်ထွက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ အချိန် မဆိုင်းတော့ပဲ ထိုင်နေတဲ့ အန်တီဆွေကို ဆွဲထူလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို အတင်းအကျပ် စုပ်နမ်းနေမိပါတော့ တယ်။ အန်တီဆွေကလဲ ကျွန်တော်ကို အလိုက်သင့် ပြန်နမ်းပါတယ်။ အနမ်းတွေဟာ ရမ္မက်တွေ ပါနေတဲ့အတွက် ကြမ်းလှပါတယ်။ အန်တီဆွေ့ အောက်နှုတ်ခမ်းသားတွေကို ကျွန်တော့နှုတ်ခမ်းနဲ့ ဆွဲဆွဲပြီး စုပ်ပေးလိုက်တာ။
ပြတ် ထွက်မလားတောင် မှတ်ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးရဲ့ လက်တွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်တွေရဲ့ အဓိကကျတဲ့ နေရာ တွေမှာ ပွတ်သတ်လို့။ဆယ် မိနစ်ခန့်ကြာအောင် နမ်းပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ နှုတ်ခမ်းချင်း ခွါလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မွတ်သိပ်စွာကြည့်ရင်း အန်တီဆွေ့အင်္ကျီကို ကျွန်တော်က ချွတ်ပေးသလို၊ အန်တီဆွေကလဲ ကျွန်တော့်အင်္ကျီကို ချွတ်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အပေါ်ပိုင်းဗလာကျင်း သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့ အန်တီဆွေ့ ဆီမှာတော့ သူမရဲ့ရင်သားနှစ် မွှာကိုထိန်းထားတဲ့ ဘရာဇီယာ အမဲရောင်လေးသာ ကျန်နေပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ အန်တီဆွေရဲ့ ဂျင်း ဘောင်းဘီကို ကျွန်တော်ချွတ်ပါတယ်။ အန်တီဆွေကလဲ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ပြီးတော့ ဘောင်းဘီချွတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ချည်သား ဘောင်းဘီတိုလေးဟာ အလွယ်တကူ ကျွတ်ပေမဲ့ အန်တီဆွေ့ရဲ့ ဂျင်းဘောင်ဘီဟာ ကျပ်နေ တာကြောင့် သူမရဲ့ပေါင်တံနေရာမှာ တစ်နေပါတယ်။ အန်တီဆွေကိုယ်တိုင်ပဲ ဖင်ကြီးကို ယမ်းပြီးတော့ ပေါင်မှာ တစ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။
အန်တီဆွေ့ရဲ့ နှစ်ယောက်အိပ် ကုတင်ပေါ်မှာ အန်တီဆွေကို ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဖိထားပါတယ်။ လုံဝန်း တဲ့ နို့တွေဟာ အနည်းငယ်ပျော့သယောင် ဖြစ်နေပေမဲ့ အောက်ကိုတွဲမကျသေးပါဘူး။ ဘရာဇီယာ အမဲလေးကို အပေါ်လှန်တင်ပြီးတော့ နို့တွေကို စို့ပေးနေတာပါ၊ အန်တီဆွေ့ရဲ့ အညိုရောင် နို့သိးခေါင်းများဟာ ကျွန်တော်စို့နေ တဲ့ အချိန်အတွင်းမှာပဲ မာထောင်ပြီး အပေါ်ကို ထိုးထွက်နေပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်တစ်ခု ပြောစရာရှိပါတယ် ကျွန်တော်ဟာ စော်ချပြီဆိုရင် နို့စို့တဲ့အပိုင်းမှာ အခုလို ပုံစံနဲ့ပဲ အရင်ဆုံးနို့ကို စို့လေ့ရှိပါတယ်။ ဘရာဇီယာကို မချွတ်ပဲ ဘရာဇီယာ ရင်အုပ်ထဲကနေပြီး နို့တွေကိ်ု အပေါ်ကို ပင့်တင်ပြီးတော့ စို့တာပါ။ ကျွန်တော်အရမ်းကြိုက်တဲ့ အနေအထားပါ။ တချို့စော်တွေက အားမလိုအားမရ ဖြစ်ပြီး တော့ ဘရာကိုချွတ်ချင်ပေမဲ့ ကျွန်တော်က ပေးမချွတ်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အောက်မှာဆက်ဖတ် ကြည့်ကြပါ။ အန်တီဆွေ ကိုယ်တိုင်လဲ ဘရာဇီယာရဲ့ ချိတ်တွေကို ဖြုတ်ပေးဖို့ ကျန်ပေမဲ့ ကျနော်လက်မခံပါဘူး။ ကျွန်တော် ဘယ်ဘယ်က နုိ့တွေကို စို့နေရင် ညာတစ်ဖက်က နို့တွေကိုလက်နဲ့ညှစ်လိုက်။
နို့သီးခေါင်းေ လးကိုလက်ညိုးလက်မနဲ့ ဖိချေလိုက် လုပ်နေပါတယ် အန်တီဆွေကတော့ တဟင်းဟင်းနဲ့ ညည်းလို့နေပါတယ်။ ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ အန်တီဆွေရဲ့ဗိုက်သား ဆူဆူဝင်းဝင်းလေးတွေကို လျှာလေးနဲ့ယက်လိုက်၊ ချက်နေရာကို လျှာနဲ့စက်ဝိုင်းဝိုင်းပေးလိုက် လုပ်ပေးနေမိပါတယ်။ အန်တီဆွေရဲ့အောက်က ပင်တီအနီရောင်လေးရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာတော့ အကွက်တစ်ကွက်တွေ့ပါတယ် ဒါဟာအောင်မြင်စွာ သိမ်းပိုက်ရမဲ့ တောင်ကုန်းတစ်ခုရဲ့ အလံဖြူပါပဲ။ အန်တီဆွေ့ ပင်တီလေးကို ကျနော် တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ လိပ်ပြီးချွတ်ပေးလိုက်တယ်။ ညနေက အန်တီဆွေနဲ့ တီသက်တို့ရဲ့အပြာခွေကို ကြည့်ထားပေမဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာအနားမှာ အရှင်လတ်လတ်တွေ့လိုက်ရတဲ့ အန်တီဆွေ့ စောက်ဖုတ်ကြီးဟာ ဆီးခုံမွှေး မဲမဲထူထူကြီးတွေကြားမှာ ဖုဖောင်းပြီး လှပနေပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ မနေနိုင်တော့ ပဲ… လှလိုက်တာ အန်တီဆွေရယ်.. လို့ တစ်ခွန်းထဲပြောပြီးတော့ အန်တီဆွေ့ စောက်ဖုတ်ကြီးကို အလျားလိုက် လျာနဲ့ယက်ပါတယ်။ ထိုးထောင်နေတဲ့ အစိလေးကိုလျှာနဲ့ တို့ပေးလိုက်တိုင်း အန်တီဆွေတစ်ယောက် တွန့်တက်သွား ပြီးတော့။
အင့်..အင့်… ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေတောင် ထွက်လို့လာပါတယ်။ အန်တီဆွေ့ စောက်ဖုတ်ကြီးမှာတော့ ဖီလ်း လာလို့ ထွက်နေတဲ့ သူမရဲ့အရည်တွေရယ်၊ ကျွန်တော်ယက်လို့ ပေနေတဲ့ ကျွန်တော့် တံတွေးတွေရယ် ခွဲခြားလို့မရ လောက်အောင်ကို စိုရွဲလို့နေပါတယ်။ အင့်…အား..ကောင်းတယ်..သား..အစိလေးကို တို့ပေးပါအုန်း..ကြမ်းကြမ်းလေး..အား..အီး..ရှီး..ဟင်း… အန်တီဆွေတစ်ယောက် ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းကို လက်နှစ်ဖက်နဲ့ကိုင်ကာ သူမကိုယ်တိုင် ပေါင်ကိုကားထားပြီး သူမရဲ့စောက်ဖုတ်ကြီးထဲကို ကျွန်တော်ရဲ့ မျက်နှာဝင်သွားမလား ထင်ရလောက်အောင် ဖိထားပါတယ်။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ကလဲ အတွင်းခံ မချွတ်ရသေးတာကြောင့် ထောင်မတ်နေတဲ့ လီးဟာ တစ်စုံတစ်ခုနဲ့ဖမ်းပြီး ထိမ်းထား သလို ဖြစ်နေတာကြောင့် အနဲငယ်အောင့်လာပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ဘာဂျာမှုတ်တာကို ရပ်လိုက်ပြီးတော့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့လိုဆွဲချွတ်လိုက်တဲ့ အခါမှတော့ ထောင်မတ်နေတဲ့ ကျွန်တော်လီးဟာ အကြောပြိုင်းပြိုင်းထပြီး စစ်မြေပြင်ကို ထွက်တော့မဲ့ ရဲရင့်တဲ့စစ်သူကြီး တစ်ယောက်ပမာ မာန်ဖီလို့နေပါတယ်။
အန်တီဆွေက ကျွန်တော့်လီးကို လာကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ပက်လက်လှန်ထားတဲ့ အန်တီဆွေ့ဘေးမှာ ဒူးထောက် ရက်။ အန်တီဆွေ့နှုတ်ခမ်းတွေဆီကို လီးတည့်တည့်ချိန်ပြီး မှုတ်ခိုင်းဖို့ရာ မဝံ့မရဲဖြစ်နေတာကြောင့်မို့ အန်တီဆွေ့ရဲ့ ညာဘက်နို့အုံကြီကိုသာ ဆုတ်ကိုင်လို့ ထားမိပါတယ်။ အန်တီဆွေ က….. သား…လာ…လှဲလိုက်လေ…… အန်တီဆွေ့စကားဆုံးတာနဲ့ ကျွန်တော်ဒူးထောက်ထိုင်နေရာကနေပြီး ပက်လက်လှန် လှဲချလိုက်ပါတယ်။ အန်တီဆွေက ကျွန်တော့်ပေါင်နှလုံးကြားမှာ ဒူးထောက်ထိုင်လိုက်ပြီးနောက် ကျွန်တော်လီးဒစ်ဖျားလေးကို လျှာနဲ့ စပြီးသပ်လိုက်ပါတယ်။ ဖော်မပြနိုင်လောက်တဲ့ အထိအတွေ့တစ်ခု ခံစားနေရချိန်မှာ အန်တီဆွေဟာ လီးကိုဒစ် မြုပ်ရုံအထိပဲ ပါးစပ်ထဲသွင်းပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်နေပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်ကတော့ ကျွန်တော့်ဥနှစ်လုံးကို လက်ကလေးနဲ့ ပွတ်သတ်ပေးနေရင်း လီးကိုအာဂေါင်ထဲ အထိရောက်အောင် ထိုးသွင်းလိုက်ပါတယ်။ အီး… အား… ကောင်းလိုက်တာ အန်တီဆွေရယ်… အန်တီဆွေကတော့ ဘာမှပြန်မပြောပါ။
သူမဟာ ကုန်းပြီးလီးစုပ်နေတဲ့အတွက် သူမရဲ့ မျက်နှာပေါ် ဝဲကျနေတဲ့ ဆံပင်တွေကို ကျွန်တော်လက်ဖျားနဲ့ စုချည်ပြီး ကိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။ အန်တီဆွေရဲ့ နို့တွေဟာ သူမခါးကိုကိုင်း ထားတဲ့အတွက် အောက်ကိုတွဲကျနေပြီး၊ သူမနို့သီးခေါင်းတွေကတော့ တစ်ချက်တစ်ချက် ကျွန်တော့်ရဲ့ပေါင်တွေ ကို လာရောက်ပွတ်သတ်နေပါတယ်။ငါးမိနစ်ခန့်ကြာတော့ ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့ပဲ အန်တီဆွေကို ကုတင်ခြေရင်းမှာ ခေါင်းထားတဲ့ အနေအထားအတိုင်း ပက်လက်လှန်လိုက် စေပါတယ်။ သူမဟာ ဒူးထောက်နေတာမို့ အရှေ့ကိုလှဲချလိုက်ရင်း မှောက်ရက်အနေအထားဖြစ်မှာမို့ အနောက်ကို လှန်ချလိုက်တာပါ။ အခုအချိန်မှာ ခေါင်း ရင်တွေ၊ ခြေရင်းတွေထက် အရေးကြီးတာ သူ့စောက်ဖုတ်ထဲ ကျွန်တော့်လီး ရောက်ဖို့ပဲ မဟုတ်ပါလား။ ပက်လက် အနေအထားနဲ့ ပေါင်းကားထားတဲ့ အန်တီဆွေ့ စောက်ဖုတ်ကို ကျွန်တော်လီးနဲ့ အပေါ်အောက် စုန်ချည်ဆန်ချည် ပွတ်လိုက်ပါတယ်။ လီးကိုအရင်းက ကိုင်ပြီးတော့ အစိရှိတဲ့နေရာကိုလဲ လီးထိပ်နဲ့ ပွတ်ပေးနေပါတယ်။ အန်တီဆွေတစ်ယောက် မျက်လုံးတောင်မဖွင့်နိုင်ရှာပဲ ဟင်း..ဟင်းး..လို့သာ ညည်းတွား နေပါတယ်။
သား… ထည့်လိုက်တော့လေ… အချိန်မဆွဲနဲ့တော့ အန်တီဆွေ့ထံမှ လေသံတိုးတိုး ထွက်လာပါတယ်။ အန်တီဆွေအသံကြားမှပဲ ကျွန်တော်သတိထားမိတာပါ။ သူမ အခန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အချိန်အရမ်းဆွဲလို့ မရဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်သဘောပေါက်တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်လီး ကို အန်တီဆွေ့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲကို တစ်ချက်ထဲ ဝင်အောင်ဆောင့်ထိုးလိုက်ပါတယ်။ အင့်… အီး…… အန်တီဆွေ နာသွားဟန်တူပါတယ်။ မျက်လုံးကြောကြီးတွေရှုံ့ပြီး အံကိုကြိတ်ထားပါတယ်။ လီးကအထဲကို ရောက်သွားတော့ နဂိုကတည်းက အရည်ထွက်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကြီးဟာ ပြည့်ကျပ်နေပါတယ်။ အန်တီဆွေ့အဖုတ် က အတော်လေး အလတ်ကြီးရှိပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ဆောင့်ချက်တွေကိုလဲ ပြန်ပြီးတော့ညှစ်ပေးထားပါတယ်။ တချက်တချက် ပြန်ပြန်ပြီး ကော့ပေးပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ တဖြည်းဖြည်း အရှိန်ကိုတင်ပြီး ဆောင့်ပါ တယ်။အန်တီဆွေ့နို့တွေကို ကုန်းစို့လိုက်.. ဆောင့်လိုက်၊ နို့သီးခေါင်းတွေကို လက်မလက်ညိုးနဲ့ ဖိပြီးချေလိုက်ပေါ့။ အား..အီး..အင့်..ရှီ..ဟင်း..အင်း..အား..အိ…အင်း…ဟင်း..ဟင်း အန်တီဆွေ့ဆီက ညည်းတွားသံတွေ ထွက်နေပါတယ်။
အန်တီဆွေ တစ်ယောက် အရမ်းကောင်းနေပါပြီ… ကောင်းလား အန်တီ… အင်း.. ကောင်းတယ်… သား.. ဆောင့်ကွာ. အားပါပါဆောင့်… အန်တီပြီးချင်ပြီ..အီး..အင်း… ပြီးချင်နေပြီး.. ဆောင့်…ဖိပြီးဆောင့်.. အန်တီဆွေ့ဆီက မဝံ့မရဲ၊ မချိတင်ကဲ တောင်းဆိုသံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အရှိန်ကိုမြှင့် ပြီး ဆောင့်လိုက်တဲ့အခါမှာ ပါးစပ်ထဲကို လက်ညိုးထည့်ပြီး စုပ်လိုက်ရင်း ခံစားရတဲ့ အရသာမျိုး ကျွန်တော့် လီးက ခံစား လိုက်ရပြီး အန်တီဆွေကလဲ လက်နှစ်ဖက်ကို အိပ်ယာခင်းတွေကို ဆုတ်ကိုင်ရင်း ခြေထောက်ကို ကြွကာ ခါးကိုကော့ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်လီးကလဲ အောက်ကိုဖိချလို့ မရလောက်အောင်ကို အန်တီဆွေ့ စောက်ဖုတ် အတွင်းသားက စုပ်ပြီးညှစ်ထားပါတယ်။ ၂မိနစ်လောက် ကြာတော့ ပက်လက်အနေအထား ခါးကိုကော့ထားတဲ့ အန်တီဆွေ တစ်ယောက် အောက်ကို ပြန်ကျသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ အန်တီဆွေ ပြီးသွားပြီဆိုတာသိလို့ အလိုက်သင့်ပုံမှန် လေးညှောင့်လိုးပေးနေ ပါတယ်။ အန်တီဆွေ တစ်ယောက် မျက်လုံးတောင် မဖွင့်နိုင်တော့ပဲ အသက်ရှုသံ တဟင်းဟင်းနဲ့ အနားယူနေပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အလိုက်သိစွာနဲ့ ဖြည်းဖြည်းနဲ့ သာသာယာယာပဲ လီးကိုအသွင်းအထုတ် လုပ်ပေးနေတာငါးမိနစ် လောက်ကြာတော့ အန်တီဆွေမျက်လုံး ပွင့်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြပြီး.. ချစ်လိုက်တာ သားရယ်…သား..မပြီးသေးဘူးလား ဟင့်အင်း အန်တီဆွေ…. သူမခေါင်းထောင်လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ပါးကို နမ်းချင်လို့ ခေါင်းထောင်လာတာပါ။ ကျွန်တော်လဲ အလိုက် သင့် ပါးကိုသူမနှုတ်ခမ်းနားကို ကပ်လိုက်တော့ ရွတ်ခနဲတစ်ချက်နမ်းလိုက်ပြီး သား… ပြီးအောင်လုပ်… အန်တီ ဘယ်လိုနေပေးရမလဲ… အန်တီ ကုန်းလိုက်…. လို့ ကျနော်မပြောရဲလို့ စကားကိုကွေ့ပြီးတော့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သား အနောက်က ချစ်ချင်တယ်… အန်တီ အင်း… အန်တီ ကုန်းပေးမယ်နော်… သား….. ဟုတ်… အန်တီဆွေတစ်ယောက် ကုတင်ခြေရင်းမှာ လေးဘက်ထောက် ကုန်းထားပါတယ်။ ကြီးမားပြီး စွင့်ကားတဲ့ တင်ပါးဖြူဖြူဖွေးဖွေးကြီးမှာ အကြောပြတ်နေတဲ့ အရာအနည်းငယ်နဲ့ ပင်တီသားရည်ကြိုး နေရာလောက်ပဲ အနာ ရွတ်ပုံစံရှိနေပြီး စင်းလုံးချောဖြူဖွေးပြီး လှပနေပါတယ်။
သူမကခါးကို အနည်းငယ် အောက်နှိမ့်ပေးထားတာမို့ ကျွန်တော့်လီးကို ကုန်းထားတဲ့အတွက် ဖင်သားဖြူဖြူကြီးတွေကြားမှာ နစ်မြုပ်နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ကို အလွယ်တကူပဲ ထိုးသွင်းခွင့်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ သူမရဲဖင်သား ဖြူဖြူကြီးနှစ်လုံးကို တစ်ချစ်စီနမ်းပေးလိုက်ပြီး လီးကိုအရင်းက ကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲကို သွင်းလိုက်ပါတယ်။ အား..အီး..အင့်..အား..ရှိး..အင့်.. အား.. ရှိး..ဟင်း လီးနဲ့စောက်ဖုတ် ရိုက်သံတွေဟာ သံစဉ်တစ်ခုသဖွယ် ထွက်နေပြီး ကုန်းထားတဲ့အတွက် အန်တီဆွေ့ နို့တွေဟာ ဘရာဇီယာ မချွတ်သေးပေမဲ့ အောက်ကိုတွဲလောင်း ကျနေပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး ပုံစံကို ပုံဖော်ဖို့ အချိန်ကျရောက်လာပါပြီး။ သူမရဲ့ဖင်သားကြီး နှစ်လုံးကို အားရှိပါးရှိကိုင်ပြီး ဆောင့်ပေးနေပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ သူမကျောပြင်က ဘရာဇီယာအနက်ရောက်လေးကို မြင်းဇက်ကြိုး ဆွဲကိုင်သလိုကိုင်ပြီး အားပါးတရ ဆောင့်ပေးပါတယ်။ အန်တီဆွေတစ်ယောက် အင့်..အင့်..ရှိး ဆိုပြီး ဖီလ်းတွေ ပြန်တက်လာပါတယ်။ အသံတွေ အရမ်းထွက်မှာ ကြောက်တာကြောင့် လားတော့မသိဘူး မျက်နှာကို အိပ်ယာခင်းနဲ့ ကပ်ထားပါတယ်။
အိပ်ယာခင်းစကို ကိုက် ထားတာ သတိထားမိပါတယ်။ အရမ်းပဲကောင်းနေလို့လားတော့ မသိပါဘူး အန်တီဆွေကို ကျွန်တော်အားပါပါ ဆောင့်ပေးရင်း ပြီးချင်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အန်တီ… ကျွန်တော် ပြီးချင်ပြီ.. စိတ်ကြိုက်ချစ်မယ်နော်..ဟု ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ အန်တီဆွေက ခေါင်းညိမ့်ပြ တာမို့ ကျွန်တော်လဲ ဘရာဇီယာကို ကျောပြင်က ချိတ်ဖြူတ်ပေးလိုက်ပြီး ခုတင်ပေါ်ကို ခြေထောက်တစ်ချောင်း တင် ကာ သူမရဲ့ဆံပင်တွေကို ဆောင့်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်ကတော့ သူမတင်ပါးကြီးတွေကို ဆုတ်နယ်လိုက် တစ်ချက်တစ်ချက် ဖြန်းကနဲရိုက်လိုက်နဲ ဆောင့်လိုးနေပါတယ်။ အန်တီဆွေကတော့ တဟင်းဟင်းနဲ့ ကြိတ်ပြီး ညည်းနေပါတယ်။ အသံအရမ်းထွက်လို့မှ မရတာကိုး။ ဒါကြောင့်ထိန်းပြီး ညည်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆောင့်ချက်တွေလဲ ပိုပိုပြီးတော့ အားပါလာပြီး ကျွန်တော့် လိင်တံ တစ်ချောင်းလုံး ကျင်သလိုဖြစ်သွားပြီး ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး တုန်တက်သွားပါတယ်။ ဆောင့်ချက်တိုင်မှာ ကျွန်တော့် လရည်တွေဟာ အန်တီဆွေ့စောက်ဖုတ်ထဲကို ဝင်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော်လဲ အံကြိတ်ပြီး လရည်နောက်ဆုံး တစ်စက်ကျန်သည်အထိ အန်တီဆွေ့ ဆံပင်ကိုဆွဲကာ ဆောင့်ပေးနေပြီး မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာတော့ သူမအပေါ်ကို မှောက်လျှက် လှဲချလိုက်ပါတယ်။ အန်တီဆွေရဲ့ ကျောပြင်ပေါ်မှာ ရောက်နေတဲ့ ကျွန်တော်ဟာ သူမရဲ့ကျောပြင်လေးမှာ ချွေးလေးတွေ စို့နေတဲ့အတွက် လျှာလေးနဲ့ လိုက်ယက်ပေးနေမိပါတယ်။ အန်တီဆွေကတော့ အသက်ရှူသံ ပြင်းပြင်းတွေနဲ့ အနားယူနေလေရဲ့၊ သုံးမိနစ်လောက်ကြာတော့ အန်တီဆွေ့စောက်ဖုတ်ထဲစိမ်ထားတဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို စွပ် ဆိုပြီး ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ အန်တီဆွေက .. လူဆိုးလေး.. အရမ်းကြမ်းတာပဲ.နောက်..အထဲမှာပြီးပစ်တယ်..သူများအိပ်ယာခင်းတွေပေါ်စီးကျကုန်ပြီ အန်တီဆွေက ညုတုတုအသံနဲ့ ပြောပေမဲ့ ကျွန်တော်ပြုံးရုံသာ ပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။ သူမဆံပင်တွေဟာ ကျွန်တော် ဆွဲဆောင့်ထားတဲ့အတွက် ရှုပ်ထွေးနေပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် အလှဆုံးအချိန် ပြပါဆိုရင် လိုးပြီးစ အချိန်ပဲလို့ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အန်တီဆွေနဲ့ ကျွန်တော်ဟာ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး သူ့ပစ္စည်း၊ ကိုယ့်ပစ္စည်းရေဆေးပြီး အပြင်ရောက်တော့အင်္ကျီတွေ ပြန်ဝတ်ပါတယ်။ အန်တီဆွေလဲ ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ခုနကချွတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံကိုသာ ဟန်မပျက်ပြန်ဝတ်ရင်း အိမ်ဖော်မလေး လာပို့ထားတဲ့ ကော်ဖီကိုသောက်ကာ ခဏကြာတော့ ကျွန်တော်ပြန်ဖို့အတွက် သူမကိုယ်တိုင် တံခါးဝအထိ လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်လဲ ဖိုင်တွဲတစ်တွဲကိုင်ပြီး ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ဆင်းခဲ့ရတာပေါ့။ အိမ်တံခါးဝရောက်တော့ ကားပေါ်တက်ခါနီးမှာ အိမ်ဖော်ကောင်မလေး ရှိနေတဲ့အတွက် အလုပ်က်ိစ္စတွေကို လျှောက်ပြောနေပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်လဲ ကားကိုမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကား မောင်းရင်း မီးပွီုင့်ရောက်လို့ မီးနီနေတဲ့ အတွက် ခေတ္တရပ်ထားစဉ်မှာ ကျွန်တော့်ဖုန်းထဲကို မက်ဆေ့တစ်စောင် ဝင်လာပါတယ်။ ပို့သူကတော့ အန်တီဆွေပါ။ စာသားကတော့…. မနက်ဖြန်လဲ တွေ့ကြမယ်နော်.. မောင်… မ..အတွက် အီးဇီးတူး ဝယ်ခဲ့ပါအုန်း..တဲ့ဗျာ…ပြီးပါပြီ။